Musharrax Jebiye oo lacag ugu deeqay Isbitaalka Bilcil iyo Ururka Dhallinyarada ee Carmo
November 19, 2018 (CARMO) – Musharraxa xilka Madaxwaynaha Puntland ee doorashada 2019, Injineer Maxamuud Khaliif Xasan Jebiye, ayaa galabta kormeeray Kulliyadda Tababarka Booliska Carmo iyo Isbitaalka Lafaha ee Bilcil.
Musharraxa ayaa soo indha indheeyey qaybaha ay Kulliyaddu ka kooban tahay, wuxuuna intaas kaddib kulan xog waraysi ah la qaatay saraakiisha maamulka xaruntaas gacanta ku haya.
Injineer Jebiye wuxuu ballan qaaday haddii loo doorto xilka Madaxwaynaha Puntland in uu sida ugu dhaqsaha badan dib ugu hawlgelin doono Kulliyadda Tababarka Ciidamada, maadaama ay tahay mid aad muhiim ugu ah tayeynta ciidamada ammaanka iyo sugidda nabadgelyada deegaannada Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya.
Booqashada Kulliyadda kaddib, Musharrax Maxamuud Khaliif wuxuu dhagax dhigay isalmarkaana lacag dhan $5,000 (shan kun oo doollar) ugu deeqay Xarunta Ururka Dhallinyarada ee Carmo.
Ugu dambeyntii wuxuu Musharraxu kormeer ku tegay Isbitaalka Lafaha ee Bilcil, kaas oo ah kan ugu weyn noociisa ee ku yaalla Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya.
Injineerku wuxuu kormeeray qaybaha bukaan-jiifka iyo gargaarka degdegga ah ee Isbitaalka Bilcil, wuxuuna xog waraysi la yeeshay qaar kamid ah bukaannada, hawl-wadeennada caafimaadka iyo maamulka sare ee Isbitaalka.
Musharraxa ayaa bogaadiyey hannaanka uu Isbitaalka Bilcil u shaqeeyo, isagoo xusay in isbitaalkaasi buuxiyey kaalin muhiim ah oo bulshadu aad baahi ugu qabtay, uuna mudan yahay in la taageero. Taas isagoo ka duulaya, musharraxu wuxuu Isbitaalka Bilcil ugu deeqay lacag dhan $11,000 (kow iyo toban kun oo doollar).
Musharrax Maxamuud Khaliif Xasan Jebiye ayaa weli ku guda jira socdaalka uu ugu magac daray ‘Tashi iyo Tabasho’. Socdaalkan ayaa ah mid musharraxu ugu kuur gelayo xaaladda guud ee dalka islamarkaana uu kula tashanayo qaybaha kala duwan ee bulshada.